DEGDEG: Nabadoon caawa lagu dilay Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
Allaha u naxariistee waxaa caawa la dilay Nabadoon ka tirsan beesha Sheekhaal Gendershe, kaddib markii rag ku hubeysan Bastoolado ay ku weerareen xilli uu marayay Buundada Ansalooti ee degmada Waaberi.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in ninka la dilay lagu magacaabi jiray Nabadadoon Maxamed Sheekh Abuukar, iyadoo kooxihii ka dambeeyay falka dilka ah ay goobta isaga baxsadeen.
Ciidamada ammaanka oo gaaray halka uu dilka ka dhacay ayaa bilaabay baaritaano ay ku baadi goobayaan kuwii dilka geystay, iyagoona howlgaladooda kula dhaqaaqay xaafadaha ku dhow meesha lagu dilay nabadoonka.
Dilalka qorsheysan iyo weerarada loo geysanayo waxgaradka iyo odayaasha beelaha Soomaaliyeed ayaa maalmahaan ku soo badanayay magaalada Muqdisho, iyadoo dilalka qaarkood ay sheegtaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
The post DEGDEG: Nabadoon caawa lagu dilay Muqdisho appeared first on Ilwareed Online.